शिक्षण अस्पतालको खातावाट १६ करोड रुपैया गायब ! – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/शिक्षण अस्पतालको खातावाट १६ करोड रुपैया गायब !
शिक्षण अस्पतालको खातावाट १६ करोड रुपैया गायब !
काठमाडौं । काठमाडौंमा एक सरकारी अस्पतालको खातावाट १६ करोड रुपैया हराएको छ । काठमाडौंको महाराजगन्ज स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय ९त्रिवि० शिक्षण अस्पतालको खातावाट करिब १६ करोड रुपैया हराएपछि खैलाबैला भएको छ । अन्नपुर्णपोष्टमा प्रकाशित समाचार अनुसार अस्पतालको बैंक नगदी किताबले २०७६ असार मसान्तसम्ममा ९मार्गस्थ र नगद ३ लाख रुपैयाँबाहेक० ९८ करोड २७ लाख ७५ हजार रुपैयाँ बैंक मौज्दात देखाएको छ । तर सो मितिको बैंक स्टेटमेन्टअनुसार भने ८१ करोड ८३ लाख ६७ हजार रुपैयाँ मौज्दात छ। बैंकमा १६ करोड ४४ लाख ८ हजार रुपैयाँ कम देखिएपछि खैलाबैला भएको हो ।
लेखा परिक्षणका क्रममा यस्तो फरक अवस्था देखिएको हो । महालेखा परिक्षणले सो रकमका बारेमा छानविन गरी बैंकको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।
तत्कालीन ग्लोबल बैंकमा २ करोड ६४ लाख ३८ हजार ऋणात्मक मौज्दात देखाएकोमा बैंक विवरण प्राप्त नभएकाले स्थिति जानकारी हुन नसकेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। तर अस्पतालका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक डा। प्रेमकृष्ण खड्गाले ग्लोबलमा बैंकिङ कारोबार नगरिएको बताएका छन् ।
यो अर्को समाचार, विदेशबाट फर्किएर तीन स्थानमा आधुनिक शैलुन
चितवन । सात वर्षअघि कतारबाट फर्किएर स्वदेशमा नै रोजगारी सिर्जना गर्न तम्सिएका एक युवकले तीन ठाउँमा आधुनिक शैलुन सञ्चालन गरेका छ । उहाँले शैलुन सञ्चालन गर्न मासिक रु एक लाख ७० हजार भाडा तिनुहुन्छ भने १४ जनालाई रोजगारीको अवसर मिलेको छ ।
भरतपुर महानगरपालिका–२१ पार्वतीपुरका सुलभ सिग्देलले दुई वर्ष कतारमा बसेर फर्किएपछि शैलुनसम्बन्धी तालीम लिएर स्वदेशमा नै पेशा शुरु गरेका हुन् । विसं २०७१ साउन ६ गते पहिलो सामान्य शैलुनबाट पेशा थालेका उनले त्यसको पाँच वर्षपछि नजिकै रु ५० हजार भाडा तिर्ने गरी शैलुन विस्तार गरे । शुरुमा उनले मासिक रु १५ हजार भाडा तिर्ने गरी शैलुन शुरु गरेका थिए थियो जहाँ रु २० लाख लगानी गरेको बताए ।
गत वर्षको साउन ६ गते नै सिजी मलमा मासिक रु एक लाख भाडा तिर्ने गरी कोठा लिएर रु ३० लाख खर्च गरेर सिग्देलले दोस्रो शैलुन शुरु गरे । यस वर्ष साउन ६ गते अर्को शैलुन दूरसञ्चार रोडमा विधिवत सञ्चालनमा आउँदै छ । जहाँ मासिक रु २० हजार भाडा तिर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । तीनवटै शैलुनमा १४ जनाले रोजगारी पाउने छन् । अधिकांशले आफ्नै शैलुनमा काम सिकेका हुन् ।
पपुलर युनिसेक्स शैलुनका नामबाट खोलिएको शैलुनमा तालीम पनि दिइँदै आएको छ । “हालसम्म ४०० भन्दा बढीले तालीम लिई सकेका छन्”, उनले भने । तीमध्ये १४ जनाले यसै क्षेत्रमा आफैँले शैलुन चलाउँदै आएको सिग्देल बताछन् । श्रीमती सुस्मिता र आफूले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् सिटिइभिटीबाट तालीम लिएर हाल महिला र पुरुष दुवैको कपाल का ट्ने देखि विवाहमा सजाउनेसम्मको काम गर्दै आएको उनको भनाइ छ ।
सिग्देलसँगै तालीम लिएर माडीको वसन्तपुर बजारमा शैलुन चलाउँदै आएका विष्णु मगर मेहनत ग¥यो भने स्वदेशमा नै काम गर्न सकिने बताउछन् । “दैनिक २० जना हाराहारी ग्राहक आउँछन्, आफ्नै देशमा पेशा गर्न म सुझाव दिन्छु”, उनले भने । गीतानगरको चोक बजारमा शैलुन चलाउँदै आएका किशोर थापामगरले पनि सिग्देलसँगै तालीम लिएका हुन् । उनी तीन वर्ष दुबई बसेर नेपाल फर्किएका हुन् । विदेशको भन्दा यहाँ बढी कमाइ हुने गरेको उनले बताए । “ मेहनत ग¥यो भने यही आम्दानी गर्न सकिन्छ”, उनले भने । उहाँले शुरु शुरुमा रु २० हजार लिएर ६ महिनासम्म तालीम दिने गर्नुहुन्थ्यो । अहिले रु ५० हजार लिएर ६ महिनाको सबै जान्ने गरी तालीम दिने गरेका छन्।
स्वदेशमानै थोरै लगानी गरेर राम्रो मुनाफा लिन सकिन्छ भन्ने उदाहारण सिग्देलसँगै यही सीप सिकेर व्यवसाय गरेकाले देखाएका छन् । लकडाउनसँगै स्थानीयप्रतिनै विश्वास बढेर गएको देखिन्छ । नेपालीले खोलेका शैलुनमा पनि केटाकेटीको विवाहको श्रृङगार, कपाल रङ्गाउने, ठाडो पार्ने, मेनिकेयर, पेडिकेयर जस्ता सबै काम हुने गर्दछन् । त्यस्ता शैलुनले रु ५० को थ्रेडिङदेखि रु ४० हजार लिएर दुलाहा दुलही श्रृङगार गर्नेसम्मका काम गर्दै आएका छन् ।
“भागरथी ह’त्या प्र’करण’को सफलता जस्तै निर्मला पन्त’को दो’षि’लाई पनि अब छिट्टै का’रवाही’को दा’यरामा ल्याउने छौ” उत्तमराज सुवेदी